စာဖတ်နည်းတဲ့သူက ဘ၀မှာ အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းတယ် – Hlataw.com
စာဖတ်နည်းတဲ့သူက ဘ၀မှာ အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းတယ်
သူမျက်လုံးလေးတွေမှိတ်သွားပြီး ကျွန်တော်ပြုလာသမျှကိုခံယူဖို့အသင့်စောင့်နေတယ် သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကအဝတ်တွေကိုချွတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ.. မီးရောင်အောက်က သူ့အလှတရားလေးတွေက ကျွန်တော့ကို ရင်ခုန်မြန်စေလာတယ်.. ချစ်သူ ရှမ်းမလေးရဲ့ မပွင့်တပွင်နခမ်းလေးရယ်… ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ ဖွာလံကျဲနေတဲ့ သူ့ဆံပင်တွေရယ်.. သူ့ရဲ့ ဖြူပြီးဝင်းအု တင်းအိနေတဲ့ ရွှေရင်မွှာနှစ်စုံရယ်… သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ အပျိုစင်လေးရဲ့အဓိက အရေးပါတဲ့ ပိပိဆိုတဲ့ အရာလေးရယ်… မြင်မိတော့ ကျွန်တော်စိတ်တွေကြွလာသလိုလိုပဲ.. (နွားသိုးကြိုးပြတ်လို့ပြောရမလားဘဲ) ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်အဝတ်တွေချွတ်ပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ်မောက်အိပ်လိုက်ပြီး သူ့နခမ်းလေးကို စနမ်းလိုက်တယ် ပြီးတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ လည်ပင်း ရင်ဘက်တွေထိ ဆင်းလာတယ်.. ။ အောက်ထိတော့မဆင်းချင်ဘူး စိတ်ထဲ မသထီစရာလို့မြင်မိတယ် ( အခုမှ နုသေးတာကိုး ရင့်လာတဲ့ နောင်တစ်ချိန်ကျမှ.. နောင်တရမိတယ် သိပ်နမ်းလို့ ကလိလို့ကောင်းတဲ့အရာမှန်း.. ) ကျွန်တော့ ညီလေးလည်းအဲ့အချိန် တော်တော်မာနေပြီ တစ်ခါမှအဲ့လောက်မမာဖူးဘူး။
သံချောင်းနဲ့ နင်လားငါလားပဲ၊ လက်တစ်ဖက်က သူ့နို့လေးတွေကိုပွတ်နေပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်ကတော့ သူ့ ဘိုက်အောက်နားကိုတဖြေးဖြေးနဲ့တိုးသွားရင်း ပိပိလေးဆီရောက်သွားတယ် သူ့ပိပိလေးက အရည်လေးတွေစိမ့်နေတာကိုသတိထားမိတယ်.. သဘာဝက ဖန်တီးပေးတဲ့ချောဆီတွေပဲလေ… ချစ်သူရှမ်းမလေးကတော့ မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပြီး တဟင်း.. ဟင်းနဲ့ ငြီးသံတိုးတိုးလေးကြားနေရသလိုပဲ မိန်းကလေးနဲ့အတူနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ မိန်းကလေးကို နှူးနပ်ဖို့ အချိန်နည်းနည်းယူရတယ်ဆိုတာ အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး ကိုယ့်ညီလေးကို ကောင်မလေးရဲ့ပိပိထဲ သွင်းကြည့်ဖို့ကိုသာ စိတ်စောနေခဲ့တာ.. ကျွန်တော် ကောင်မလေးအပေါ်မောက်အိပ်လိုက်တယ် ရှက်လွန်းကြောက်လွန်းလို့ တုန်နေတဲ့ သူ့ပေါင်လေးတွေကို နည်းနည်းကားလိုက်ပြီး ပေါင်တံဖွေးဖွေးလေးနှစ်လုံးကြားမှာ နေရာဝင်ယူလိုက်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော့ညီလေးကို သူ့ပိပိနဲ့ တေ့လိုက်တဲ့အခါ.. သူက ရုတ်တရက် သူ့ပိပိလေးကို လက်နဲ့ကာတယ်၊ “ ငါ.. နာမှာကြောက်တယ်ဟာ.. ” “ နင်ကလည်း မနာပါဘူးဟ.. ငါက ငါ့ချစ်သူကိုနာအောင်လုပ်ပါ့မလား။
နာရင်ပြော ငါမလုပ်တော့ဘူး ဟုတ်ပြီလား… ” ( ကိုယ်သူ့ကို လိမ်ပြောလိုက်တယ်ထင်တယ် ) သူ့လက်ကလေး ပြန်ရုတ်သွားအခါမှာတော့ ကျွန်တော့ညီလေးဟာ အခုပဲ ထိုးစစ်ဆင်တော့မယ့် စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလို သိပ်ကိုမာန်ထပြီး တက်ကြွလွန်းနေတော့တာ… “….. …… “ အရည်ရွဲနေတဲ့ သူ့ပိပိအဝလေးနဲ့ ကျွန်တော့ညီလေးစတင်ထိတွေ့ပြီး ဒစ်ဖျားလေးနဲ့ ထောက်မိတဲ့အခါ အသံတချို့ထွက်လာတယ်.. ဘာသံနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ စာသင်ခန်းထဲမှာ မုန့်ခိုးစားရင်း ပါးစပ်ကမြီတဲ့အသံတိုးတိုးလေးမျိုး…. ကျွန်တော် စိတ်တွေထိန်းမရတော့ဘူး ခါးနဲ့တင်ပါးကိုအားယူပြီး ဒစ်ဖြားလေးကို အဖုတ်လေးထဲ ခပ်ဆက်ဆက်နစ်ထည့်လိုက်တယ်.. ပြစ်… “ အ.. နာတယ် ဟ.. ” “ စောရီးနော် ဖြည်းဖြည်းလုပ်မယ်… ” ဒစ်ဖြားလေးဝင်စက ရင်တွေတော်တော်ခုန်တာ ဆက်သွင်းလေ ပိုပြီးသွင်းချင်လာလေလေဖြစ်လာတယ်..။ ကိုယ်လည်းတတ်သမျှမှတ်သမျှ လေ့လာထားသမျှ အောစာအုပ်ထဲကအတိုင်း အဆုံးထိမသွင်းကြည့်သေးဘဲနဲ့ တဖြည်းဖြည်းအသွင်းအထုတ်လုပ်ကြည့်လိုက်တယ် သူ့ပိပိအတွင်းသားလေးတွေက ကျွန်တော့ ညီလေးကို အတင်းဆွဲညစ်ထားကြတယ် တစ်စက္ကန့်ပြီး တစ်စက္ကန့် ဖီလင်တွေရနေတော့တာပါပဲ။
ပြီးတော့ ခပ်ဆက်ဆက်လေး ဖိသွင်းလိုက်တယ် “ ပြွတ်… ဖောက်… ” “ အ.. အရမ်းနာတယ်ဟာ.. မရဘူးထင်တယ် ” ကျွန်တော့ညီလေးရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် ကောင်မလေးရဲ့ ပိပိထဲဝင်သွားပြီးတဲ့ခါမှာတော့ သူ့ရဲ့အပျိုစင်လွာလေးကို ကျွန်တော့ ဒစ်ဖြားကြီးက မစာမနာထိုးခွဲမိသွားတယ်နဲ့တူပါတယ် လုပ်ရှားနေတာကိုခဏရပ်လိုက်ပြီး သူ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်စတချို့ကိုတွေ့ရပြီး အောက်ကိုငုမ့်ကြည့်လိုက်တော့ သွေးစတချို့အိပ်ယာခင်းမှာပေနေတာကို တွေ့ရတယ်၊ ကျွန်တော့ပေါင်နားမှာလည်း သွေးစတချို့ပေနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ကျွန်တော်လည်း မထူးတော့ပါဘူး ဆိုပြီး ဆက်ကာဆက်ကာ လိုးလိုက်တော့တယ် ဗျစ်…. ဗျစ်… ဒုတ်.. အား… အရမ်းနာတယ်… ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ရှီးးးး… ပြွတ်ပြွတ် အခုဆိုရင် ကျွန်တော့လိင်တံရဲ့ဒစ်ဖျားလေးက ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ သားအိမ်ထဲထိကို ထိုးစစ်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်.. ကျွန်တော့ လီးတစ်ချောင်းလုံး သူ့ပိပိလေးထဲမှာ စိတ်ရှိလက်ရှိကို မွေကာ ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်များနေတယ်၊ ပေါ်ပိုင်းက နို့တွေကိုလည်း ကျွန်တော်တအားစို့လွန်းတာကြောင့် နို့သီးလေးတွေတောင်ပန်းရောင်သန်းရာကနေ ပိုပိုရဲလာတယ်။
နောက်တော့ ကောင်မလေးဆီက ညည်းသံတချို့ထွက်လာပြီး ကျွန်တော့ကို အတင်းဖက်ထားတော့တယ် ကျွန်တော်ကလည်း ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ကိုစောင့်နေမိတယ်၊ “ အင်း… ဟင်း…. ရှီးးးး ” “ အား… တမျိုးကြီးပဲ တလှပ်လှပ်နဲ့.. ရပ်ပေးပါတော့နော် ငါမနေတတ်တော့ဘူးဟာ.. ” ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ ဒီကောင်မလေး အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ဖို့ လက်တစ်ကမ်းပဲလိုတော့တယ်ဆိုတာ… ကျွန်တော့လက်နှစ်ဖက်ဟာ သူ့ဂျိုင်းအောက်ကနေလျှိုပြီး ပုခုံးကိုဘယ်ညာဖမ်းဆုတ်ထားလိုက်တယ်… ပြီးတော့ အားရပါးရ ခပ်မြန်မြန်လေးစောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့ကိုဖက်ထားရာကနေ ကျွန်တော့ကျောကို သူ့လက်သည်းတွေနဲ့ထောက်လာတယ် ပြီးတော့ ကုတ်ခြစ်လာတယ်… နာတော့နာပေမဲ့ သူ့ကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ပို့ပေးချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် အားကုန်သုံးပြီး ခပ်သွက်သွက်လေးစောင့်ပေးနေလိုက်တယ်.. ။ အချက် ၂၀ခန့်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူ အမြင့်ဆုံးကိုရောက်လုပြီထင်ပါတယ် သူ့ရင်ဘက်တစ်စုံကော့တက်လာပြီး သူ့လက်သည်းတွေကလည်း ကျွန်တော့ကျောပြင်ကို ကုပ်ခဲထားတယ်။
“ အား…. အဟင့်… ဟင့်.. တော်ပြီဟာ.. ငါ မရတော့ဘူး မနေတတ်တော့ဘူးဟာ ” ကျွန်တော်လည်း အားကုန်သုံးပြီးစောင့်ပေးလိုက်တာ လေးငါးဆယ်ချက်လောက်အပြီးမှာတော့ ဟင်း.. ခနဲ သက်ပြင်းချသံနဲ့အတူ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားတယ်.. သူ့ပိပိလေးလည်း အရည်တချို့ပန်းပြီး စိမ့်ထွက်လာတယ်.. ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်တံအစွမ်းနဲ့ ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အပျိုရှမ်းမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပထမဆုံး ပန်းထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်လေးတွေလေ… အိပ်ယာနဲ့လွတ်ပြီးကော့နေတဲ့သူ့ရင်ဘက်လည်း အိပ်ယာပေါ်အသာအယာပြန်ကျသွားတော့တယ်.. သူ့တစ်ကိုယ်လုံး အကျောတွေလျော့သွားပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့လူတစ်ယောက်လို ငြိမ်သက်သွားတယ် ပြီးတော့ ချွေးစို့နေတဲ့သူ့မျက်နှာလေးဟာ ပြုံးယောင်လေးသန်းနေတာကို အခုထိမြင်ယောင်မိတုန်းပဲ… သူ…. ကာမရဲ့အမြင့်ဆုံးအရသာကိုမြည်းစမ်းကြည့်ဖူးသွားပြီလေ… အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ တာဝန်တစ်ခုပြီးဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တစ်ယောက်လိုခံစားလိုက်ရတယ် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသွားသလိုပဲ ကျွန်တော့ညီလေးဆီက ဘယ်ချိန်သုတ်ရည်ထွက်ထွက်အရေးမကြီးတော့ဘူးလေ။
ကိုယ့်အလှည့်ပဲကျန်တော့တာကိုး ကျွန်တော်လည်း သူ့ပိပိလေးထဲမှာ သုတ်ရည်လေးတွေထည့်ကြည့်ချင်စိတ်တွေပေါက်လာတဲ့အတွက် ခပ်မြန်မြန်လေး အသွင်းအထုတ်လုပ်နေမိတယ်… အချက် ၃၀ခန့်စောင့်လို့အပြီးမှာတော့ ခြေဖျားတွေအေးစက်လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကျင်တက်လာသလိုလိုခံစားရတယ်၊ အဲ့ဒီနောက်မှာပဲ ရှုနေတဲ့အသက်ကို အောင့်ထားပြီး ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်စောင့်ကာ နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဆက်တိုက်စောင့်အပြီးမှာပဲ တစ်ပါတ်လောက်ဂွင်းမတိုက်ဘဲ စုထားတဲ့သုတ်ရည်တွေကို ဒစ်ဖျားကနေတဆင့် ချစ်သူ အပျိုရှမ်းမလေးရဲ့ သားအိမ်ထဲကို ပန်းလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်…….. (ပြီးခါနီးရင် အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လေလေ ပိုဖီးတက်လေလေလို့ ဖတ်ရဖူးတယ်.. စမ်းကြည့်.. ) ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ပိပိကလည်းမခေဘူးဗျ ကျွန်တော့ဒစ်ဖျားကထွက်လာသမျှ သုတ်ရည်တွေကို ဆွဲဆွဲစုပ်ယူနေသလိုပဲ… (နောက်မှသိရတယ် အဲ့ဒါ မြော့.. တဲ့ ) ကျွန်တော့မျက်လုံးထဲမှာ ကြယ်တွေလတွေမြင်ပြီး စကြာဝဋာထဲက ဂလက်ဆီတွေကြယ်စုတွေထဲ လျှောက်သွားလိုက်ရသလိုပဲ လုံးဝကို ခမ်းနားပြီး ဖီလင်တွေတက်ပြီးရင်းတက်လာတာ….။
ဪ.. ကာမအရသာဆိုတာ ဒါကိုပြောတာနေမယ်ဆိုပြီး သဘောပေါက်လာတယ်… ကျွန်တော့နည်းသူ ကာမအမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ မလုပ်မယှက်ငြိမ်ကျသွားတဲ့ချစ်သူ ရှမ်းမလေးလည်း ဒီတိုင်းတွေးမိမယ်ထင်ပါတယ်…. ။ ကျွန်တော့ သုတ်ရည်တွေကို ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ပိပိထဲပန်းထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ညီလေးက အာသာမပြေသေးဘူးထင်တယ် နည်းနည်းပျော့သွားပြီး ဆွဲထုတ်မယ်ကြံကာမှ ပြန်မာလာတယ်… မမာဘဲနေမလား.. ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ပိပိအတွင်းသားလေးတွေကို ကျွန်တော့ လိင်တံတစ်ချောင်းလုံးကို အလွန်အမင်း ငုံခဲထားတာကိုး… ကျွန်တော်လည်း ဒုတိယအကြိမ် သုတ်ရည်လေးတွေကို ရှမ်းမလေးရဲ့ပိပိထဲထပ်ပြီးပန်းထည့်ချင်စိတ်ပေါက်လာလို့… သူ့ပိပိလေးထဲ ကျွန်တော့ လိင်တံကို အသွင်းအထုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်လုပ်နေလိုက်တယ်…. “ မပြီးသေးဘူးလားဟာ… ငါ အိပ်ချင်နေပြီ ” “ ပြီးသွားပြီလေ.. အခုက ဒုတိယအကြိမ်… ” သူ… နားမလည်ဟန်နဲ့ ကျွန်တော့ကို မေးလာတယ်.. “ ပြီးတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဟင်.. ” “ ခုဏက နင်တစ်ခုခုထွက်သွားတယ်မလား… အဲ့လိုပဲ ငါလည်းအခုထွက်သွားတာ… အခု.. ဒုတိယအကြိမ်ထွက်ချင်လို့လေ…. နင့်ကိုလည်း ဒုတိယအကြိမ်ထွက်စေချင်တယ် ငါတို့အတူတူပြီးရအောင်လေနော်…. ” ဆိုတော့။
မရွှေချောကရှက်ပြုံးလေး ပြုံးပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်.. ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော့လိင်တံက ရှမ်းမလေးရဲ့ပိပိလေးထဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်တဲ့အခါ သူရော ပူးပေါင်းပါဝင်လာတယ် သူ့တင်ပါးလေးတွေနဲ့အားယူပြီး အောက်ကနေပြန်ပြန်ကော့ပေးတတ်လာတယ်…. နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါကျတော့ ချစ်သူရှမ်းမလေးက မောဟိုက်နေတဲ့အသံလေးနဲ့.. “ ခုဏကလိုပြန်ဖြစ်လာပြီဟာ.. ရှုးပေါက်ချင်လာသလိုလိုမျိုး ” “ အဲ့ဒါ.. ရှူ ရှူးမဟုတ်ဘူး အချစ်ရည်လေးတွေဟ.. ” “ ဟာ… နင်ကလဲ နားရှက်စရာတွေပြောနေတာ.. ” “ မရှက်ပါနဲ့ဟာ… ဒါမျိုးက ပွင့်လင်းလေ အမြင့်ဆုံးမှာ ပိုကောင်းသွားလေပဲဟ နင်မယုံရင် ရှက်တာကြောက်တာတွေခဏဘေးဖယ်ထားပြီး စိတ်ကိုရှော့ချထားလိုက် ခုဏကလို ထွက်ချင်စိတ်တွေတွေးထားလိုက် Ok လား…. ” “ Ok.. တွေးလိုက်ပြီ…. ” ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့လိင်တံနဲ့ ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ပိပိဟာ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ မွန်ဂျေအင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အမ်းတို့ရင်းနှီးသွားကြသလိုမျိုး ပိုပိုပြီးအပေးအယူမျှကာ အလုပ်ဖြစ်လာတယ်…. ရှမ်းမလေးရဲ့ ပိပိအတွင်းသားတွေကလည်း ကျွန်တော့ရဲ့လိင်တံကို ဆွဲညစ်လိုက် ဒစ်ဖျားလေးကို ငုမ်ခဲထားလိုက်နဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်လာပါတယ်။
ခုဏက နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ သုတ်ရည်လေးတွေ ထွက်ထားတဲ့အတွက် ဒီတစ်ခါ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရတာ နည်းနည်းလေးချောကျိကျိဖြစ်လာသလိုလိုပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ ဒစ်ဖျားလေးက ရှမ်းမလေးရဲ့ပိပိအဝကနေ သားအိမ်ထဲထိသွားရာလမ်းတစ်လျှောက်လုံး ခပ်ကျပ်ကျပ်လေးပါပဲ… အခုမှ အပျိုရည်လေးပျက်စကိုး ပိပိက ပါဝါမကုန်သေးဘူး တင်းနေတုန်း ကျပ်နေတုန်းပဲလေ… အဲ့ဒီလိုအသွင်းအထုတ်လုပ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ “ အား…. တမျိုးကြီးပဲ…အရမ်းကောင်းလာတယ်… ပြီးလာတော့မယ်ထင်တယ် မြန်မြန်လေး မြန်မြန်လေး… ” အမယ်… သူလေးက တောင်းဆိုတတ်လာပြီကိုး… ကျွန်တော်လည်း ခပ်ဆက်ဆက်လေးစောင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ.. သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့ကို အတင်းဖက်ထားပြီး… သူ့ရဲ့ရွှေရင်အစုံဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကော့တက်လာပါတယ်… ။ အား…အား… ထွက်ကုန်ပြီ…ထွက်ကုန်ပြီ… အား…. အား…. ရှီးးး…. အဟင့်ဟင့်.. အရမ်းချစ်တယ်လို့…. အရမ်းကောင်းတာပဲဟာ…. ရှမ်းမလေးရဲ့ပိပိလေးထဲကနေ သုတ်ရည်တွေအများကြီးထွက်ကျလာတယ်… ပထမတစ်ခါထက်တောင်ပိုများသေးတယ်… အပြင်ထိကိုထွက်ကျလာတာ…. ဒီတစ်ခါတော့ ရှမ်းမလေး တကယ်ကို ရုပ်ကြိုးပျက်ပုံကျသွားပါတော့တယ်…. ။
နခမ်းလေး မဟတဟနဲ့ မောသွားရှာတာ…. ချွေးတွေစို့ပြီး ပြုံးယောင်သန်းနေတဲ့သူ့မျက်နှာလေးနဲ့ မပွင့်တပွင့်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့နခမ်းလေးကို ကြည့်ပြီး သူ့နို့လေးတွေကို အသာညစ်ချေကာ ခပ်သွက်သွက်စောင့်နေပါတော့တယ်… နည်းနည်းကြာလာတော့ ကျွန်တ်ာလည်း ပီးချင်တာတာနဲ့…. ခပ်မြန်မြန်လေးစောင့်ရင်းကနေ… အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်… ကြည့်နေကျ ဖူးကားတွေထဲကလို သုတ်ရည်ထွက်ခါနီး ပိပိထဲကနေဆွဲထုတ်… ပြီးရင် စော်ရဲ့ပါးစပ်ထဲကို သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်ရတာမျိုးလေ… အဲ့ဒီလို လုပ်သင့်မလုပ်သင့် တွေးနေတုန်းရှိသေးတယ်… ပြီးချင်လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကျင်တက်လာတာနဲ့….. ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့ရဲ့လိင်တံကို ရှမ်းမလေးရဲ့ပိပိထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်ကာ.. ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ရင်ဘက်အပေါ်ဘက်နားကိုခွလိုက်စဉ်မှာပဲ ရှမ်းမလေးက မျက်လုံးဖွင့်လာပြီး အံ့သြောသွားတဲ့ပုံနဲ့ ပါးစပ်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်… သူ.. ဘာလုပ်မလို့လဲဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ပေါ့….. ရုတ်တရက်ဆိုတော့ သူ ကြောင်သွားတယ်ထင်တယ် သူသတိပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့ရဲ့ ပြီးခါနီးမာတောင့်နေတဲ့ လိင်တံဟာ သူ့ရဲ့နခမ်းတွေကို ပွတ်တိုက်သွားပြီး ပါးစပ်ကိုဖြတ်ကာ အာခေါင်အရင်းနားထိရောက်သွားပြီလေ…. ။
သူရုန်းမယ် အလုပ်မှာ… ကျွန်တော် သူ့ ခေါင်းကို ဖမ်းထိန်းထားလိုက်တယ်… တကယ်တော့ အဖြစ်ပျက်က အရမ်းမြန်တာ စာနဲ့မို့ အရှည်ကြီးဖြစ်နေတာ “ ချစ်လေး.. ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပါဟာနော်…. ရှီးးးး အား….. ထွက်တော့မယ်… စုပ်စုပ်…. စုပ်ပေး… ရှီးးး ကောင်းလာပြီ ချစ်လေး…. ” အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သူသဘောပေါက်မှာပါ… သူနားလည်မှာပါလေ… ။ သူလည်း ရောယောင်ပြီး ကျွန်တော့လိင်တံကို ငုံခဲထားပြီး စုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်လည်း ပိပိကိုလုပ်သလိုမျိုး ကျွန်တော့လိင်တံဟာ သူ့နခမ်းတွေဖြတ်ကျော်ပြီး ပါးစပ်ထဲမှာ ခပ်မြန်မြန်လေး အသွင်းအထုတ်လုပ်နေမိတော့တယ်… ပါးစပ်ကိုလိုးတာ ပိပိထက်ပိုကောင်းမှန်း.. အခုမှသိတာ.. ထိတွေ့ခံစားမှုက နွေးနွေးလေးနဲ့ အသဲယားစရာလေး… ပါးစပ်ထဲမှာ ကိုယ့်ဒစ်ဖျားလေးနဲ့ ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့လျှာလေးနဲ့ ခလုပ်တိုက်သွားတိုင်း ကျင်ကျင်တက်လာတာ.. လိုမှန်းသိ ပထမတစ်ချီကတည်းက ရှမ်းမလေးရဲ့ပါးစပ်ထဲ တစ်ပါတ်လောက်ဂွင်းမတိုက်ဘဲ စုထားတဲ့သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်လို့ တွေးမိလိုက်သေးတယ်… ။
ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့တစ်ကိုယ်လုံးကျင်တက်လာပြီး… ရှီးးး…. အား…. ချစ်လေး…. ထွက်တော့မယ်… ထွက်တော့မယ်…. အား… တအားစုပ်…..ဟုတ်ပြီ အဲ့လိုတအားစုပ်ပေး.. အား…. ရှီးးးးး ထွက်ပြီ… ထွက်ပြီ…. အ.. အ.. ရှီးးးးး ဗြစ်… ဗြစ်… ဗြစ်…. ဆိုပြီး ကျွန်တော့ ဒစ်ဖျားအထိပ်မှ သုတ်ရည်တွေဟာ ရှမ်းမလေးရဲ့ပါးစပ်ထဲကို ဒလဟောဝင်သွားပြီး သူ့ရဲ့ အာသီးနားထိကို ပန်းထွက်ကုန်ပါတော့တယ်…. ကျွန်တော့ လိင်တံကို ရှမ်းမလေးရဲ့ပါးစပ်ထဲက မထုတ်သေးဘဲ စိမ်ထားလျှက်နဲ့… “ ချစ်… ကိုယ့်ကိုချစ်ရင်… မြိုချလိုက်နော်…. ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ရည်တွေကို မထွေးလိုက်နဲ့နော် နှမြောလို့ပါ… နော်… နော်…. ” ရှမ်းမလေးကလည်း ကျွန်တော့ လိင်တံကိုငုံထားလျှက်နဲ့ပင်… ကျွန်တော်ခွထားတဲ့အောက်ကနေ ကျွန်တော့ကို ဂျိုကြည့်.. မျက်စောင်းထိုးပြပြီး ပြုံးသွားကာ… ဂလု ဂလု.. လို့အသံမြည်လာသည့်တိုင်အောင်ကို ကျွန်တော့ သုတ်ရည်တွေကို မြိုချလိုက်ပါတော့တယ်……..။ မနက်မိုးလင်းလို့.. ကျွန်တော်အိပ်ယာကနေနိုးလာတော့.. ကျွန်တော့ဘေးနားမှာ… ချစ်သူရှမ်းမလေး အိပ်နေတုန်းပဲ… အဲ့.. အိပ်နေတုန်းဆိုတာထက်.. လဲနေတယ်လို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်… မျက်လုံးဖွင့်ပြီးဘာတွေစဉ်းစားနေမှန်းမသိဘူးလေ… ( မျက်နှာသစ်ပြီးပြန်လာလဲနေတာနေမယ်… ) “ဟိတ်… ဘာတွေတွေးနေတာလဲ.. ညက ပွဲကြမ်းခဲ့တာလေးတွေ ပြန်တွေးရင်း ရင်ခုန်နေတာလား “။
“နင်နော်… ပေါက်ကရတွေပြောမနေနဲ့… ခဏနေငါ ပြန်သွားရင်.. သူငယ်ချင်းက ငါ့ကိုအစ်အုံးမှာ သိတယ်… နင်နဲ့ မနေ့ညကအိပ်ခဲ့တာ ပေါ်သွားမှာစိုးတယ်ဟ…. ” “သိလည်းဘာဖြစ်လဲဟ သူလည်းနားလည်မှာပါ သူလည်း သူ့ဘဲနဲ့ အိပ်ချင်အိပ်ဖူးမှာပေါ့ “ဟုပြောကာ မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေချိုးခန်းထဲထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်…. ကျွန်တော် ရေချိုးခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာတော့ ရှမ်းမလေးက ရေချိုးမလို့ထင်တာပဲ… ထဘီရေရှားကာအပေါ်ပိုင်းကိုတဘတ်လေးနဲ့ပါတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ဖို့စောင့်နေတာလေ…. ကျွန်တော်လည်း သူ့လက်ကိုခက်ဆက်ဆက်လေး စောင့်ဆွဲလိုက်ပြီး…. လာခဲ့ ရေအတူတူချိုးမယ်.. ဒီတစ်ဘတ်တွေ ဖယ်လိုက်လေဟာ.. ငါမမြင်ဖူးတာကျနေတာပဲ ရှက်နေသေးတယ် ” အမာ… အခုမှတော့မထူးတော့ပါဘူးနော်… နည်းနည်းအေးလို့.. တစ်ပါတ်ပါတ်ထားတာ” “ဒါဆို.. နင်မရှက်တော့ဘူးပေါ့နော်… အဲ့ Sorry.. ငါဆိုလိုတာက… ဆက်စ် ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး နင်နဲ့ငါ ပွင့်လင်းသွားပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်… ” ကျွန်တော် ပြောသာပြောနေတာ အောက်ကညီလေးက တဖြေးဖြေးနဲ့ မာထောင်လာပြီ… မြောက်ကိုရီးယားက ဂျပန်ပင်လည်ထဲကိုပစ်တော့မယ့် ထိပ်ဖူးတပ်ဒုံး ကျနေတာပဲ… တော်တော့ကို မတ်လာတာ…..။
သူကလည်း.. ပြန်ပြောရှာပါတယ်… အင်း တဲ့….. ” ဒါဆိုရင်… ငါ နင့်ရဲ့ ပိပိလေးကို မှုတ်ပေးမယ်ဟာ… ပြီးရင်ငါ့ရဲ့ညီလေးကို စုပ်ပေးနိုင်မလားဟင်… နော်… ” ” တော်ပြီ… ငါ့ကိုမလုပ်ပေးပါနဲ့ ငရဲကြီးနေမယ်… ငါပဲနင့်ကိုလုပ်ပေးမယ်…. ဟုတ်ပြီလား ” လို့ပြောပြီး ကျွန်တော့ရှေ့တည့်တည့်ကို ချစ်သူရှမ်းမေးလက ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ သူ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့.. သူ့မျက်နှာနဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ မာတောင့်ပြီးတင်းကားနေတဲ့ လီးနဲ့ တည့်တည့်ဖြစ်နေရောပဲ…. ကျွန်တော်လည်း ပါတ်ထားတဲ့ တစ်ဘက်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်…. ” အမလေး… ဒါကြီးနဲ့ ညက ငါ့ကိုလုပ်တယ်…. ” သူအံ့သြောမယ်ဆိုလည်း အံ့သြောလောက်ပါတယ်… ကျွန်တော့ညီလေးက အစွမ်းကုန်ကိုထောင်မတ်နေတာကတစ်ကြောင်း သူလည်း မနေ့ညက ခံပေး စုပ်ပေးသာလုပ်လိုက်ရတာ… ကျွန်တော့ ညီလေးကို ကောင်းကောင်းမကြည့်လိုက်ရဘူးလေ…. “ကဲ.. အံ့သြောနေတာလေး ခဏဘေးချိတ်ပြီး… ပုလွေလေးပေးလိုက်ရအောင်လေနော်… ” ” ဘာလဲဟ ပုလွေဆိုတာက… ” ကျွန်တော်လည်း ညီလေးကိုလက်ညိုးထိုးပြပြီး… “ဒါကိုပုလွေအမှတ်နဲ့ မှုတ်ပေးရတာကိုပြောတာ… ” ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကို သူ သဘောကျသွားတယ်ထင်တယ်.. ခိ ဆိုပြီးရယ်ကာ… ကျွန်တော့ရဲ့ ညီလေးအထိပ်လေးကို သူ့ရဲ့လျှာလေးနဲ့ တို့ထိကြည့်နေတော့တယ်… ။
အခုမှကြုံဖူးတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ မနေ့ညကကျတော့ ရုတ်တရက်ကိုး… အခုမှ သူလေးက တစ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ စူးစမ်းတော့မယ်ထင်ပါတယ်လေ….. ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ချစ်စရာနခမ်းလေး နည်းနည်းဟလာပြီး ကျွန်တော့ညီလေး ထိပ်ကို ငုံလုဆဲဆဲမှာ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်တသိနဲ့ ဒစ်လေးလှန်သွားအောင် လီးပေါ်က အရည်ပြားလေးကို တဖြေးဖြေးနောက်ဆုတ်လိုက်တော့ ကွက်တိပဲ သူလည်းအငုံ ကိုယ်လည်းအလှန်ပေါ့…. ခံစားချက်ကတော့ ကြုံဖူးသူတွေသာ နားလည်လိမ့်မယ်… တစ်ကိုယ်လုံးနွေးထွေးသွားသလိုခံစားရပြီး တထစ်ထစ်နဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့နူးညံ့မှုတွေကြားထဲတိုးဝင်နေရသလိုအပြင်ကို သူ့လျှာလေးနဲ့ ကိုယ့် ဒစ်ဖြားလေး ဝိုင်းပါတ်သွားတဲ့အချိန်ဆို… လုံးဝ ဆွေမျိုးမေ့ပဲ…. ” ရှီးးးး အား… ချစ်လေး…. ကောင်းတယ်ကွာ… စုပ်… ဒီထက်မြန်မြန်လေးနော်… ချစ်လေးပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးချင်လို့….. ရှီးးး အား ကျွတ် ကျွတ်…. ” တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့သွားလေးနဲ့ ကိုယ်ဒစ်ဖြားလေး ခလုပ်တိုက်သွားတဲ့အချိန်ဆို… တစ်ကိုယ်လုံး ကျင်ကျင်တက်သွားတာ… ကိုယ်လည်း သူ့ရဲ့ ခေါင်းလေးကိုကိုင်ပြီး ဆံပင်လေးတွေကို ဖွဖွပေးနေလိုက်တယ်…. သဘောကတော့ အဲ့လိုလုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့…. ။
သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကို ကိုယ့်လက်နှစ်ဖက်နဲ့အသာလေးဖမ်းထိန်းထားပြီး သူ့ပါးစပ်လေးထဲမှာ ကိုယ့်ညီလေးကို ထိုးထိုးမွေနေမိတယ်…. ” ဟိတ်… အဆုံးထိထည့်ကြည့်ချင်တယ်… နခမ်းကိုဒီထက်ပိုဟပေးထားလို့ရမလား နော်…. ” ဆိုတော့ ချစ်သူရှမ်းမလေးက ကိုယ့်ညီလေးကို ငုမ်လျှက်သားနဲ့…. မော့ကြည့်လာတယ်…။ ပြီးတော့ ငုမ်လျှက်သားပဲ အင်း… လို့ ပြန်ဖြေပြီး သူ့နခမ်းတွေကို ဟနိုင်သလောက်ဟထားပေးပါတယ်… ကိုယ်လည်း မီးစိမ်းပြတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ခေါင်းကို သေချာကိုင်ပြီး ကိုယ့်ညီလေးကို ရှမ်းမလေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲအဆုံးထိ တဖြေးဖြေးနဲ့ ထည့်နေတယ်…. ကိုယ့် ဒစ်ဖြားက ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ အာသီးကိုဖြတ်ကျော်လာလေလေ ပိုပြီးဖီးလာလေလေပဲ… ” ရှီးးး အားလားလား… ကောင်းလိုက်တာချစ်လေးရယ်…. ရှီးးးး ကျွတ်.. ကျွတ်…. ” ကျွန်တော့ ဒစ်ဖြားလေးကို ညီလေးတစ်ချောင်းလုံးကုန်တဲ့ထိ ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့.. အော့… ဆိုပြီး သူ အန်ချင်သလိုဖြစ်လာတာနဲ့ ကိုယ့်ညီလေးကိုမြန်မြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ်… “နင်ကလဲ အတင်းပဲ… ဒီမှာ အန်ချင်သလိုလိုတောင်ဖြစ်လာပြီ”ဆိုပြီး လှမ်းပြောလာတယ်…. “ကဲ.. အဲ့ဆိုလည်း မက်တပ်ရပ်တော့ ဟိုဘက်လှည့်ထား ဆိုပြီး” သူ့ကိုဆွဲထူလိုက်တယ်…။
သူလည်းအလိုက်သင့်လေး ထလာပြီး ကျွန်တော့ဘက်ကိုကျောပေးထားတယ်… သူ့တံတွေးတွေနဲ့ ချောကျိကျိဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ညီလေးဟာ… အပျိုရည်ပျက်သေးတာမကြာသေးတဲ့ ရှမ်းမလေးရဲ့ပိပိထဲကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့တာစူနေပြီလေ…. “တအားမလုပ်နဲ့နော်.. မနေ့ညက နင်လုပ်ထားတာ အရမ်းပဲ… တအားနာနေတာ… ရှူးပေါက်ရင်တောင် တော်တော်စပ်တာဟ…. ” ကိုယ်လည်း ဘာမှမပြောနေတော့ပဲ ဒစ်ဖြားလေးကို ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ပိပိကို လှမ်းထောက်လိုက်တယ်… အနောက်ကနေမို့လို့လားမသိဘူး အပေါက်ကနည်းနည်းရှာရခက်တယ်… ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်… ဒစ်ဖြားလေးနဲ့ အပေါ်အောက်သပ်ကြည့်လိုက်လို့ ချိုင့်ဝင်သွားတဲ့နေရာဟာ… ပိပိလေးပဲလေ…. ကိုယ်လည်း ဒစ်ဖြားလေးမြုပ်ဝင်သွားတဲ့အခါ ရှမ်မလေးရဲ့ပိပိလေးထဲကို ဒစ်ဖြားလေးပိုဝင်သွားအောင် အသာလေး နစ်ထည့်လိုက်တယ်… တစ်ဝက်လောက်ထိဝင်သွားအောင်ကို နစ်ထည့်လိုက်တာ… ” ရှီးးးး ကောင်းတယ်ကွာ… ပါးစပ်လည်း ကောင်း… ဖုတ်ဖုတ်လေးလည်းကောင်း…. ဒီလိုချစ်သူမျိုးပိုင်ရတာ ကံတောင်းတာပဲ ဟဟ ” ” အမာ… နင်က ငါ့ကိုအဲ့လိုလုပ်ချင်လို့ချစ်တာပေါ့လေ….” “အာ…မဟုတ်ပါဘူးသဲလေးရာ… အရင်ကတည်းကချစ်တာ…။
အခုကျ ပိုချစ်လာတာ… ဟီး ဟီး ” ” ကောင်စုတ်… လူလည်… ငါ့ကိုလုပ်တာ ရစရာကိုမရှိတော့ဘူး….” ကိုယ်လည်း ညီလေးကို ပိပိလေးထဲ တစ်ဝက်လောက်ထည့်ပြီး သူ့လက်တွေကို နံရံမှာထောက်ထားခိုင်းလိုက်တယ်… ခါးနည်းနည်းကိုင်းခိုင်းပြီးတော့ပေါ့…. ပြီးတော့ ညီလေးကိုဆက်သွင်းရင်း အနောက်ကသိုင်းဖက်ကာ ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ဝင်းဝါတင်းအိနေတဲ့ ရင်မွှာလေးတွေကို ဖိညစ်ပေးနေမိတယ်…… ။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဆက်သွင်းလာကာ အဆုံးထိရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့…. ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လေးတွေ စ လိုက်ပြီလေ…. ” မြန်မြန်လုပ်ဟာ… ငါ ရေချိုးခြင်နေပြီ” ဆိုပြီး… မောဟိုက်သံလေးနဲ့ပြောလာတယ်…. သူ ပြီးချင်နေပြီလို့ သွယ်ဝိုက်ပြောလိုက်တာ ကိုယ်သိသားပဲ… မိန်းမလေးတွေများ ဝန်သာဝန်မခံချင်တာ… သူတို့လည်း အထန်တွေဗျ…. ကိုယ်တွေထက်တောင်ဆိုးသေးတယ်… ” အ… ကျွတ်ကျွတ်… မြန်မြန်လေး.. မြန်မြန်လေး….. ” ကိုယ်လည်း… ကောင်မလေးပြီးတော့မယ်ဆိုတာ သိတော့ ခပ်ဆက်ဆက်လေး ညီလေးကို ပိပိလေးထဲမှာ ကစားပေးနေလိုက်တယ်…. နောက်ထပ် အချက် ၂၀ ၃၀ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့…။
” ရှီးးးးး အဟင့်…. ငါထွက်ခြင်နေပြီ….. မြန်မြန်လေး….. ရှီးးးး အားလားလား…. ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ…. ရှီးးး အားးးးး ” ဟုဆိုကာ ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့တစ်ကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက်သလို တုန်ချိလာပြီး…. ။သူ့ပိပိမှလည်း သုတ်ရည်တွေ ခပ်ဆက်ဆက်ထွက်လာပါတော့တယ်…. ပိပိထဲမှာလည်း ချောချိချိနဲ့ဖြစ်လာပြီး သူ့ရဲ့ပိပိက သုတ်ရည်ထွက်လေလေ ကျွန်တော့ညီလေးကို ဆွဲဆွဲညစ်လာသလိုလိုဖြစ်လာတော့… ကျွန်တော်လည်း သုတ်ရည်တွေကိုမထိန်းထားနိုင်တော့ဘဲ ” ရှီးးးး အားးး ချစ်လေး…. မြော့ပါတယ်ထင်တယ်…. အသားကုန် ဆွဲညစ်ပြီး ဆုပ်ယူနေတော့တာပဲကွာ ပြီးတော့မယ်ချစ်လေး…. ရှီးးး အားလားလား…. ထွက်ပြီ ချစ်လေး….” ချစ်သူရှမ်မလေးရဲ့ နို့တွေကို အသားကုန်ဆွဲညစ်ထားလိုက်ပြီး ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့…. ပိပိလေးထဲကနေတဆင့် သားအိမ်လေးထဲထိကို ကျွန်တော့ရဲ့ သုတ်ရည်တွေ အများကြီးပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်……. ကျွန်တော့ညီလေးကို ချစ်သူရှမ်းမလေးရဲ့ ပိပိလေးထဲ စိမ်ထားပြီးမှိန်းနေလျှက်ပင်… အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်….. ဒီနေ့တစ်ရက်လည်း ဟိုတယ်မှာဆက်နေပြီး… ခရေပွင့်ကိုခြွေကြည့်ဖို့… အားမွေးထားရမယ်ဟု…. တွေးနေမိပါတော့သည်……ပြီးပါပြီ။
ပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့ရက်တွေ ရောက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်